Cranberry | Kudya kweNutri
Chikafu chidiki ichi chine mukati mezvinhu zvakaisvonaka zvinobatsira kwazvo muviri, zvinonaka zvishoma zvinoruma izvo inogona kuvandudza zvakanyanya hutano.
Kana iwe uchiri kusaziva mabhenefiti ecranberries, ramba uchiverenga iyi mitsara nekuti isu tinokuudza mawaniro avanogona kukuita iwe nekuvandudza hutano hwako.
Ivo vanopa akakosha ezvehutano mabhenefiti ayo vanovaka nezvehutano haana kufuratirwa. Iyi michero mitsvuku inopa kuravira kwakasviba asiwo inotapira, kunyangwe iwo mablueberries atinoziva zvakanyanya iro bhuruu rakasviba rakada kuita dema.
Lingonberries zvakabatana chaizvo ne matambudziko ane chekuita nechidundira uye hutachiona hwewetiNekudaro, ivo vanogona kutibatsira mune mamwe maitiro akajairika ehutano hwedu.
1 Cranberry inobatsira
1.1 Ivo vanodzivirira urinary kusagadzikana
1.2 Inoderedza njodzi yekenza
1.3 Iri kumutsidzira
1.5 Inovandudza kuona
1.6 Chikafu chinorwisa mafuta
1.8 Inoderedza chirwere cheshuga
1.9 Inowedzera cholesterol yakanaka mazinga
1.10 Yako yekuziva mabasa uye ndangariro zvichawedzera
Lingonberries vanovhiringidzika nemaabhurubheri vachitenda kuti vachazoravira zvakafanana, zvisinei, izvi zvakanyanya kusviba uye acidic. Chitarisiko chayo chakafanana, ichiponesa mutsauko muvara. Iyo yakajairika bhuruu inotapira uye bhuruu, mukuwedzera, inogona kudyiwa yakanangana, kune rimwe divi, iwo matsvuku ezvinonhuwira zvavo, anotorwa akagadzirwa.
Hazvisi zvakajairika kuvawana muzvitoro sezvigadzirwa zvitsva, nekuti hachisi chigadzirwa chinoshandiswa zvakanyanya. Nekudaro, mune dzakasarudzika zvigadzirwa zvitoro
Tevere tinokuudza macranberries angakubatsira sei?
Ivo vanodzivirira urinary kusagadzikana
Ivo vakakwana kana zvasvika kune kudzivirira kana kubvisa urinary turakiti hutachiona, uye izvi zvinokonzerwa nehuwandu hwayo hwe antioxidants. Hatifanire kukanganwa kuti aya mablueberries akapfuma mumatannin anopa maantibiotic mabhenefiti anotibatsira kudzivirira rudzi urwu rwehutachiona.
Inoderedza njodzi yekenza
Cancer parizvino chimwe chezvirwere chinotyiwa zvakanyanya nevanhu, inogona kurwisa chero chikamu chemuviri uye zvichienderana nedanho rekukura icho chirwere chinouraya.
Iko kushandiswa kwekranberry, senge zvimwe zvakawanda zvekudya zvechisikigo, kunogona kushandiswa sechombo chekudzivirira che chengetedza cancer. Inobatsira kurwisa njodzi yekupararira kwemasero ekenza kana aya ari mashoma, nekuwedzera, haina kukuvadza mamwe maseru ese.
Makemikari mune lingonberries anazvo proanthocyanidins, zvinhu zvinobatsira zvinoshamisa zviitiko uye nekuvandudza hutano mune zvese. Ivo vanononoka iyo nguva yekuchembera kweganda nekubvisa mahara radicals uye nezvavanoita paganda. Naizvozvo, kana iwe uchida kuona rako ganda zviri nani, usamire kutora cranberries.
Cranberry ine yakawanda antioxidants, pamwe nemaanti-inflammatories. Naizvozvo, zvinonzi zvinobatsira kwazvo kuderedza mamwe maratifomu akadai sedumbu rakazvimba, gasi, kuomarara, kurwadziwa kwemhasuru, kurwadziwa kwekuenda kumwedzi, nezvimwe.
Iko kuona pamwe nekufamba kwenguva kunogona zvakare kutambura kumwe kushomeka uye kukuvara kweiyo oxidative, nyama yemaziso yeziso reziso rinogona kukuvara zviri nyore. Neichi chikonzero, isu tinokukurudzira kuti udye cranberries kuitira kuti maanthocyanins akubatsire kudzivirira aya kukuvara kwemaziso.
Chikafu chinorwisa mafuta
Kana iwe uri kutsvaga kuti uderedze uremu, iwe unogona kuwedzera kudyiwa kwekranberries mukudya kwako. Izvo zvine fiber uye hazvipe yakakwira madosi emakori. Chibereko chine hutano kuti iwe unogona kushandisa kugadzirisa matumbu mashandiro uye zvinokubatsira kuti unzwe kugutsikana neicho chikuru mupiro wefibre.
Vanoita senge neuroprotective, yehuwandu hwayo hwe antioxidants. Uye zvakare, gallic acid inoshanda nekuwedzera kugona kweiyo neuronal system.
Inodzivirira hosha dzakadai se Alzheimer's, Parkinson's izvo zvinokanganisa zvakananga zvakasikwa uye zvakajairika kukura kwekuziva chiitiko.
Inoderedza chirwere cheshuga
Iko kushandiswa kwekranberry kunogona kutibatsira isu kunatsiridza insulin kunzwa kune vamwe vanhu vakafutisa izvo zvinopesana neiyi hormone. Iyo inorwisa chirwere cheshuga uye inobatsira muviri kugaya makabhohaidhiretsi nenzira kwayo, nekudaro ichidzivirira shuga yeropa kubva mukukwira zvakanyanya.
Uyewo, inobatsira kudzivirira eropa glucose spikes, kuvandudza insulin mhinduro mumuviri. Nenzira iyi, zvinovaka muviri zvinotakurwa zvirinani uye ropa rinotenderera pasina matambudziko. Kudzivirira kuunganidzwa kwecholesterol muropa uye tsinga.
Inowedzera cholesterol yakanaka mazinga
Sezvaunoziva, ivo varipo mhando mbiri dzecholesterol, HDL yakanaka, kana yakaipa LDL. Mune ino kesi, cranberries inobatsira kubvisa yakaipa cholesterol uye nekuwedzera yakanaka cholesterol mazinga.
Yako yekuziva mabasa uye ndangariro zvichawedzera
Si buscas wedzera kugona kwako kwekuziva edza kudya yakawandisa macranberries, mukuwedzera, iwo achakubatsira iwe kuvandudza ndangariro yako uye kugona kwako. Kutora michero zvakare kunotendera kunatsiridza maitiro ekudzidza uye ndangariro mune zvese.
Tsvuku cranberries ndezvekudya zvaunogona kuwana zvese muzvinhu zvakasikwa, mune zvinwiwa kana makapisi. Zvisinei kuti unozvifarira sei, ita shuwa kuti mablueberries akakura zvine hunhu uye nemhando yepamusoro nekuti nenzira iyi muviri wako unonakirwa nechikafu chakakwirira muzvivakwa. uye mabhenefiti emuviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kudya kweNutri » Nutrition » Cranberry tsvuku